Iintlanzi zeCarp: iimpawu kunye neentlobo ezahlukeneyo | Ngeentlanzi
UCarlos Garrido | | Amanzi akwariyam akwariyam, Amanzi abandayo e-aquarium
Xa kufikwa kumba wokuba nomdla ekufumaneni iintlobo ngeentlobo zeentlanzi ukongeza kwi-aquarium yethu, uluhlu olukhulu lweentlobo luvulwa phambi kwethu, ezinobungakanani bayo, imibala, njl. Nangona kunjalo, ngaphakathi kokwahluka okutyebileyo, kukho enye intlanzi evelele ngaphezulu kwezinye ngenxa yeempawu eziyenze yathandwa. Sithetha ngeentente, enye ye iintlanzi zamanzi abandayo eziqhelekileyo
1 Impawu zeentlanzi zeCarp
2 Iintlanzi zeKois
3 Uyinyamekela njani iKois okanye iCarp yethu?
4 Iindidi kunye neentlanzi zeCarp
Impawu zeentlanzi zeCarp
ICarp eqhelekileyo (iCyprinus carpio) ivela kwilizwekazi laseYurophu nelaseAsia. Ngenye yeentlanzi zasemanzini ukumelana ngakumbi nokulungelelaniswa ngcono nendawo ohlala kuyoKungenxa yoko le nto ikwazile ukoyisa phantse zonke iimbombo zomhlaba kwaye ifumene inyhweba yokungena kuluhlu lwezona zilwanyana zimbi zinezona zinobungozi emhlabeni ngokwe-Union Union yoLondolozo lweNdalo.
Ngokwesiqhelo, iisampulu zabantu abadala zifikelela kubude obuhluka phakathi kwe Iisentimitha ezingama-60 nama-90, kunye nobunzima ngeenxa zonke Iikhilogram ezi-9.
Uyazi ihlala ixesha elingakanani intlanzi intente enkulu? Kuqikelelwa ukuba ezinye iisampulu, ukuba ziyakonwabela iimeko ezithile ebomini bazo, zinokufikelela kwiimitha eziyi-1.2 kwaye zinobunzima obungama-40 kg, kwaye zigqithe kwiminyaka engama-60 ubudala, phantse kungabikho kwanto! Baza kuphila emanzini amileyo kunye namanzi amtyuba kancinci lo gama zikubushushu obuphakathi kwe-17 kunye ne-24 ºC.
Zizo ikakhulu omnivorous, kunye nokutya kwayo kubandakanya izityalo zasemanzini, izinambuzane, ii-crustaceans ezincinci, njl. Ixesha lokuzala liqala ngentwasahlobo, kwaye lenzeka kumanzi anzulu, ashinyeneyo.
Abafazi baya kulala Amaqanda ama-300.000 leyo, ngokuxhomekeke kubushushu bamanzi, inokuqanduselwa emva kweentsuku eziyi-3-4.
Amadoda nabafazi bafumana ukukhula ngokwesondo kwiminyaka emi-4 ubudala. Nangona, i-priori, ingenayo imibala eqaqambileyo, e-China kwaye, ngakumbi eJapan, bakwazile ngokuzala abathinjiweyo ukuvelisa iintlobo ezintsha okanye uhlobo lwemibala eqaqambileyo necacileyo, encinci ngobukhulu, eyaziwa njenge Koyi.
I-Koi, ngokungafaniyo nezinye iintlobo zoodade abaphumeleleyo zivela kwicandelo lokuzingela nokuloba, baye bathandwa njengezilwanyana zasekhaya. Njengomdla, uKoi ngesiJapan uthetha "uthando" okanye "uthando", kwaye ukufuya kwezi zilwanyana kwakhula kakhulu ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, xa amachibi aseJapan koi apho ikhaphethi enemibala ezisa ubuhle yaduma kakhulu. . Kakhulu, kangangokuba la machibi asasazeka aya kumazwe ahlukeneyo ngaphandle kwendawo yaseAsia, kunye nomfanekiso umfuyi weCARP oqeqeshiweyo.
Uyinyamekela njani iKois okanye iCarp yethu?
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, iiKois ziye zaba njalo intlanzi yasekhaya ngokugqwesa. Kakhulu, kangangokuba yeyona nto iphakanyiswayo kubo bonke abo baqala kule nto imnandi kangaka kwaye bafuna ukuzama iintlobo ezifuna inkathalo encinci, zibetha ngokubonakala nangombala, kwaye eso sisiqinisekiso sempumelelo kwii-aquariums zabo. namachibi.
I-Carp yentlanzi okanye i-Kois inokhetho lwangaphambili iindawo eziphakathi okanye ezisezantsi ukusuka kwindawo abakuyo, uhlala unyukela kumphezulu ukuze ondle. Banokuhlala ngokwamaqela amancinci, ukuya kuthi ga kwiitotali ezipheleleyo Abantu aba-6-7. Ewe kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba ngamanye amaxesha banokubonakalisa umlinganiswa onogonyamelo, ngakumbi kwiindidi ezincinci. Le meko igxininiswa kwezi ndawo zincinci zinabantu abaninzi, apho kulula ukuqaphela ukuba ezi ntlanzi baneengxaki zobundlongondlongo. Ke ngoko, ayicetyiswa into yokuba uwafake kwiitanki zentlanzi ezincinci, ezinje ngeenxa zonke ezijikelezayo, okanye kwezo ndawo zasemanzini apho bahlala kunye nenani elikhulu leemodeli. Oku kuyakwenza ukuba uphuhliso lwakho lube lolona lubalaseleyo. Indawo ibalulekile kwezi ntlanzi, kungoko ke kucetyiswa ii-aquariums kulingana okanye ngaphezulu kweelitha ezingama-90 zamanzi.
Amaqondo obushushu bamanzi akufuneki abe yingxaki enkulu, kuba sele siqaphele ukuba ezi zilwanyana ziqhelana kakuhle neemeko zemozulu. Nangona, unikwe ukhetho, ezi ntente zincinci banyamezele ingqele ngcono, logama nje iphakathi, kunobushushu, kuba amaqondo obushushu aphezulu anokukhokelela ekuswelekeni kweoksijini emanzini, ekunokuthi, kube yingozi kubaqeshi bayo. Kukho iimeko kumachibi apho ezi zilwanyana zincinci ziye zanyamezela kude kube yingqele.
Iyakuba kukutya kobuNgcali...
Isidlo sasebusika se-JBL ...
ISera - Umbala weKoi Nature,...
Ngokuphathelele ukutya, sele kutshiwo ukuba zii-omnivores (kufutshane nezilwanyana ezitya inyama), ke musa ukuphambana. Ne ukutya okwe-flake esikufumana kulo naliphi na iziko ngokukodwa kwizilwanyana, kwanele. Kodwa ukuba sifuna ukuba bonwabele ukutya okutyebileyo okwahlukeneyo, sinokubapha okunye phila ukutya okufana nemibungu encinci yezinambuzane ezisetyenziselwa ukuloba. Ukongeza, ezinye izongezo zemifuno azikhathazi, nokuba zibonelela imifuno yendalo, apho siya kuthi siqwalasele indlela abazithatha ngayo kancinci. Kuya kufuneka uyazi ukuba ebusika, i-Kois kunye ne-carp encinci zingena kwinkqubo ye ukudinwa, apho umsebenzi wayo uncitshiswe kakhulu, oko kuthetha ukwehla kwemetabolism kwaye, ngenxa yoko, kukutya kwesilwanyana. Ukuba siyabona ukuba xa umtyisa, akakutyi ukutya okanye akwenzile oko ngamanani amancinci kakhulu, ayicetyiswa into yokuba sinyanzelise, kungasathethwa ke, kuba ukutya kakhulu kunokubangela iziphumo ezibulalayo.
Omnye umba obaluleke kakhulu kukucoca amanzi. Ukucoca i-aquarium yethu okanye ichibi kufuneka kwenziwe ngendlela ngaphandle. Ukuba iintlanzi zethu zikwi-aquarium encinci ngaphandle kwesihluzo, kufuneka senze utshintsho lwamanzi rhoqo, kuba olu hlobo luvelisa inkunkuma eninzi ehlisa umgangatho weoksijini ogcinwe emanzini. Sicebisa ukuba ubheje kwisihluzi sangaphandle ezinje ngezi.
Iindidi kunye neentlanzi zeCarp
Kwimarike sinikwa iintlobo ngeentlobo zeentlanzi ze-carp kwi-aquarium yethu. Ngaphandle kokuba ziintlobo ezifanayo, zininzi Iintlanzi Intente apho imibala kunye neemilo zihlala zahluke kakhulu. Yaziwa njenge "I-American Comet" Yeyona ntlobo ixhaphakileyo kuba ifuna inkathalo encinci. Iimpiko zazo aziphakamanga kwaye nomzimba wazo ubhityile. Ulandelwa ngu "Ryukin" o "Umsila wekhuselo", eneempiko ezinde kunye nomzimba otyebileyo. Zifana kakhulu nezokugqibela zezi "Ukuthandaza" kunye "INtloko yeNgonyama", nangona ezi ntlobo zithwala uphawu lweepepillae ze-cephalic. Ezi zintathu, njengoko sisitsho, zezona zixhaphakileyo, kodwa uninzi lwezinto ezintle zinokongezwa kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » ICarp
ULiz sifuentes sitsho
Ndineentente ezimbini ezinjenge-orenji kumfanekiso wokuqala, kodwa azililo iorenji, ziyisilivere, ingxaki kukuba enye yazo ijika ibomvu kwaye andazi ukuba kutheni, ukuba sisifo okanye kukutya, enye intente umbala ofanayo wesilivere
Phendula uLiz Sifuentes
Ngokomgaqo, olu hlobo luyi-carp, hayi i-carp, zinokufana okuninzi, kodwa zahluke kakhulu kwezinye. Umzekelo, qaphela ukuba ikhaphethi ayinayo nayiphi na inkwethu kwaye ayinambala,. Kwelinye icala, i-carpin ewe kwaye ziindidi zemibala eyahlukeneyo kwaye zinemisila emibini, ziqhelekile e-China. eneneni zikhuliselwa ukutyiwa ngabantu.
Ikhaphethi nayo, kodwa yahlukile ... nangona kunjalo ndiza kuzama ukuphendula umbuzo wakho.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba zonke iintlanzi ekuthinjweni kufuneka zibe neoksijini eyaneleyo emanzini, kubalulekile ukuba uzame ukonyusa amanzi ngeendlela zombane (izixhobo).
Ngamanye amaxesha isenokuba kukutya okungagqitywanga.
Amanzi empompo awalunganga ngenxa yokugqitha kwekalika kunye neklorine.
Ingcebiso: tshintsha ichibi uzame ukutshintsha ukutya, ndikucebisa ukuba udibane nengcali hayi nabani na othi uyazi.
IMOTO EQHELEKILEYO YINYE YEZILWANYANA ekunokwenzeka ukuba bambalwa abantu ababenethuba lokuzibona kobunye ubungakanani. NDIYA KWISILWANYANA ESIFIKILEYO ESIFIKELELE KWEZIKHULU KUNZIMA KUNZIMA UKUKHOLELWA
UAnnette alvarez sitsho
Molo, ndiyimvolontiya enesihloko, ndiyakuxelela ukuba igalufa okanye intlanzi yegolide, nokuba yeyomtsalane okanye umsila osasazekileyo, yiminqamlezo yemfuza. Ungathenga isampuli eneempawu ezithile kunye nombala, ukuhlela ngokuhamba kwexesha kunokutshintsha i-morphology kunye nombala ngokunjalo kuba umbala ufunyanwa ngabazali nookhokho babo. Kufana nokuthandaza ukuba kukho utshintsho oluthile olwenza ukuba lukhule lube lukhulu kakhulu kwaye lunokuthintela umbono. Kule meko, ungenelelo lotyando kufuneka lwenziwe kwaye intsalela isuswe. Ndenze ikhosi ezimbalwa ngelixa ndiphantsi kwe-anesthesia kwaye kwenziwa etafileni emanzini kunye nezikhuselo ezifanelekileyo. Kuzo zonke ndiphumelele ngokupheleleyo. Ndingafumana i-cyst kwenye indawo yomzimba ebuthathaka ngakumbi ukuyisusa ngomngcipheko ongaphezulu. Ndiyathemba ukuba olu hlaziyo luza kukusebenzela. Ndivela eUruguay, nayiphi na imibuzo kwinkonzo yakho. Malunga noAnnette
Phendula kuAnnette Alvarez
Liz, ungalibali ukuba ubushushu bamanzi kufuneka bube phantsi kwaye ichibi likhulu kwaye linamacandelo ahambelana nalo kubomi balo obude.
UHoracio Paez sitsho
Ndibhabha iintlanzi zecyprinids, zininzi izinto ezahlukeneyo zekhaphethi kunye neebarbel, kubomi obuqhelekileyo kwaye zingatyebeli ukuloba ikhaphethi ikhaphethi inokufikelela kuma-30Kg. Kukho ezingama-47 kodwa sele etyebe kakhulu (ngenxa yamathumba). Ebusweni ungabona iifoto zam zezinye iintlobo ezinkulu. facebook com / ukuloba ngenqanawa
I-Liz: ngaphandle kokujongela phantsi iimpendulo zangaphambili kunokubakho izizathu ezininzi, andazi ukuba iintlanzi zakho zingakanani kodwa ukuba zingaphantsi kweminyaka emi-3 ubudala kukho into ebaluleke kakhulu ekufuneka ithathelwe ingqalelo kuba kuyinto eqhelekileyo, kokubini imeko yekhaphethi eqhelekileyo okanye ikhoi njengefishfish phantse kuzo zonke iindidi zayo ukusukela ekuzalweni ukuya kwiminyaka eyi-3. kamva iminyaka yakhe emi-3 yobomi, kwaye kwimeko yam yobuqu uninzi lwaluthanda ukuthatha imibala ebomvu okanye e-orenji ngokupheleleyo
Imizekelo emi-3, imthubi enye ineaketas kunye nomqolo omnyama, iphela iorenji ngokupheleleyo, iorenji enamaphiko amnyama namhlanje iorenji ngokupheleleyo, iorenji enomgca omnyama embindini womzimba, namhlanje phantse yonke imnyama ngaphandle kweorenji eyomeleleyo Ukuba iyalondolozwa entlokweni, ezi-3 ziicarassius okanye (intlanzi egolide) yohlobo olwahlukileyo endiyithandayo
Molo NDINESI-1M D ESIDE X 0.40 CN D ESIPHAKAMILEYO NOKU-030 D UBubanzi BOKULOBA
NDINGAYIFAKA IKHARPI INTLANZI UMMELWANE ENDIPHA NDIPHALE NDINESIBONO ESIPHELELEYO SAYE BAYATYA UKUTYA KWEKAT
Molo, ndenze nje ichibi lama-2000 eelitha kwaye ndathenga iintlanzi ezi-6 zecarp kodwa kwiveki endinazo ziye zahamba kancinci, ndizondle kube kanye ngemini ngokutya koy. Ngaba iqhelekile into yokuba bazole kangaka? njengenyaniso eyongezelelweyo kwisixeko sam iSantiago de Chile kukho iidigri ezili-14 emini kwaye malunga ne-7 degrees ebusuku, sikwindla.
Umbuzo ndivela esixekweni saseBahia Blanc emazantsi e-pvcia ye-Bs As, Argentina ... Umbuzo wam umalunga nokutyiswa kwe-carp ebusika, ndiyazi ukuba kumazwe afana ne-Spain bazilobela ngengqele enkulu, nantsi Ndizamile kwaye khange ndikwazi ukufumana nayiphi na into ... umbuzo wam ngowokuba kukho amathuba okukwazi ukuloba okanye akunakwenzeka, enkosi kakhulu
UAna Lilia sitsho
Molo, ndinentlanzi efana nale imthubi abathi iyi-koi yegolide kwaye ndifuna ukwazi ukuba ikhula kakhulu na
Phendula ana lilia
Zingaphi ii-carp kwi-chromosome 1?
Phendula u dolly
Ndingathanda ukwazi ukuba bayazithengisa iintlanzi zeCarp carp, leyo ikhoyo kwidama laseChile
URAUL RAMOS sitsho
Yintoni enokwenzeka ukuba ndibabeka kwidama lokuqubha elingasasetyenziswanga, linamanzi amileyo iminyaka emi-4, ndizamile i-PH, kwaye ilungile, bandixelele ukuba ndibeke i-aerator, kuba ayinaso isihluzo, ichibi Malunga neelitha ezingama-5000, zingaphantsi kwesiqingatha sePULA.
Phendula RAUL RAMOS
Molo, ndinendawo echibini ene-carp eninzi, kufuneka ndiyilungise echibini ngoko ke kuya kufuneka ndiyisuse, ndingathanda izindululo zoluhlobo luni lwamanzi endifanele ndizifumane ngelixa ndisalungisa ichibi kwaye Lixesha elingakanani ixesha elinconyelweyo.
UDavid bravo morales sitsho
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba intlanzi yam ye-koi iyazonakalisa na ezinye iintlobo zentlanzi kuba yenye yeentlanzi ezijamelene nengonyama ziyafa kwaye andazi ukuba kutheni. Enkosi
Phendula kuDavid Bravo Morales
Molo, iintlanzi zeCARP zifuna ioksijini
Molo, intlanzi ye-carp ifuna ioksijini, intlanzi yam iyadada kakhulu kwaye ngaphezulu ndifuna ukwazi ukuba iyayifuna na ukuze ikwazi ukuyinceda.
Zingaphi iintlobo zeentlanzi ezikhoyo?
Ihlala ixesha elingakanani intlanzi?